Canab | February 2020
Digaagga Broiler: Sidee iyo Maxaa Loogu Joojiyo Shimbiraha Doonaya
Editor Ee Doorashada February 20,2020
Ugu Weyn Ee Canab
Talooyin loogu talagalay sii kordhaya iyo astaamaha cagaarka Buffet
Iyadoo bilawga xilliga dayrta, canabku ugu dambeyntii wuxuu ka muuqanayaa dukaamada dukaamada iyo suuqyada. Dhamaanteen waxaan rajeyneynaa waqtigan marka aad si buuxda ugu raaxeysan karto dhadhanka macaan iyo aroortii hodan ah ee berry kuwan oo casiir leh. Waxay nagu soo jiidanayaan noocyo kala duwan oo kala duwan, kuwaas oo si weyn u ballaarinaya xulashada dadka iibsadey, si kastaba ha ahaatee, waxay ku adkaataa doorasho adag oo ah dadka go'aansada in ay u koraan buuggan beerahooda.
Ciirnaanta khamriga iyo canab
Maanta waxaannu ka hadli doonaa noocyada kala duwan ee canabka qabta "Pinot Noir", oo loo isticmaalo in lagu sameeyo khamri leh dhadhan fantastik ah. Waxaad baran doontaa halka ay beero canab ah koray, waxa khamriga loo qiimeeyo, sida ay u adagtahay in ay u koraan noocyo kala duwan oo ku yaal boggaaga. Kala hadal qodobbada muhiimka ah ee beerto iyo daryeelka ee beeraha canabka ah.
Grape top "Elegant": sharaxaadda iyo beerista noocyo kala duwan
Marka ugu horeysa, waxay u muuqan kartaa in ay bannaanka u janjeeraya in canabka sii kordhaya waa geedi socodka adag iyo dadaalka. Xaaladaha badankood, aragtidani waa qalad. Maqaalkani waxaan isku dayi doonaa in aan ka saarno khuraafaadkan iyada oo la adeegsanayo tusaale ahaan noocyo kala duwan oo gaar ah oo loogu talagalay dadka beeralayda ah ee cusub. Waxaan kuu soo bandhigi doonaa canab qurux badan "Elegant", sharaxaadiisa, muuqaalada kala duwan, iyo sidoo kale sawirro geedo iyo miraha.
Canqal canab "Tason": in ay u qoondeeyaan meel ka mid ah beertii canabka ahayd?
Maanta, tiro caado ah oo kala duwan oo kala duwan oo sabiib ah. Waxaa ka mid ah cows, kaas oo si gaar ah u jecel yahay winegrowers. Tani waa ururinta noocyo, berry ah oo leh caraf xoog leh, oo aad ugu dhow maaskarada. Muscat waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo wineska ugu fiican ee laga sameeyey madoollada cad, madow iyo casaan.
Kala duwan noocyada canabka ah xilliga hore ee Geedka
"Gourmet Early" waa wakiil aad u fiican oo ah canab miiska, oo lagu kala duwan yahay dhadhan jilicsan iyo dabeecadaha dibedda oo muuqaal leh. Heerka aan qabyada ahayn ee fudud ayaa si fudud u barbar socda sida koonfurta, iyo waqooyiga. Taariikhda "Gourmet early" ayaa la soo saaray dhawaan - in yar oo ka badan 10 sano ka hor by mid ka mid ah midka ugu horeeyay ee qaranka Viktor Nikolayevich Krasnov.
Kala duwanaan noocyo darsin ah oo canab ah oo canab ah
Dadka jecel Grape ka hor inta aan la dooran noocyo kala duwan waa in ay go'aamiyaan nooca noocan oo kale ah oo la doorbidayo goobtooda iyo kan midkasto badan oo dhadhankiisa ah. Kaliya oo aad u ogaato faahfaahin faahfaahsan oo leh aragti kasta iyo astaam xisaabeedka waxaad samayn kartaa xulasho sax ah. Tusaale ahaan, haddii caleemaha loo qorsheeyay in loo isticmaalo winemaking, ka dibna xulashada ugu fiican waa Cinjirka Muscat, sharaxaad ka mid ah noocyo taas oo leh sawirka iyo hadda dheeraad ah.
Goobidda iyo daryeelka canab "Xusuusta dhakhtarka qaliinka" ee dalka
Cunto qabow oo macaan ah oo xasuusta dhakhtar qalliin ah, inkastoo ay yartahay kooxaha yaryar iyo guriga, waxay si fiican ugu tartamaan noocyada hore. Intaa waxaa dheer, winegrowers ku qanacsan isaga isaga caabuq diidmo qabow, cudur iyo dulin. Waa maxay noocyada kala duwan, sida loo abuuro geedka canabka ah ee beerta u gaarka ah iyo waxa la sameeyo si loo ururiyo dalagyada wanaagsan sanadkiiba - waxaan ka sheekeyn doonaa wax walba tan dambe ee maqaalka.
Sidee iyo goorma loo sameeyaa canab dhanaan
Awoodda geedka canabka ah wuxuu saameeyaa qiyaasta dalagga, iyo xaddiga isku dheelitiran wuxuu saameynayaa tayada. Si loo gaaro qaybinta saxda ah ee nafaqooyinka iyo hagaajinta dhalid, ka gooyay qaybaha xad-dhaafka ah ee biqil. Si aad u ogaatid sida loo xoqo canabka iyo dardargelinta Bisaylkiisa, hoos ku akhri. Qiimaha geedi socodka xayeysiinta waa habka loo jarayo qaybta sare ee caleemaha dhirta oo leh caleemo.
Goorta iyo sida loo tolo canab
Canab - geed geedo ah oo aad u qurux badan oo ka mid ah qaybta beerta. Ma jiraan waxyaabo badan oo lagu magacaabo "beerta canabka ah", sababtoo ah sida baadiyaha ah, haddii uusan beerta beerta, ka dibna ku dhowaadba. Si dhirta, marka lagu daro quruxda, si ay u keento goosashada wanaagsan, waxaa lagama maarmaan ah in si haboon loo daryeelo oo si joogto ah u fuliso nidaamyo dhowr ah, mid ka mid ah taas oo ah in laga saaro kore.
Riesling: Xeerarka abuurista iyo daryeelidda noocyo caan ah
"Riesling" - noocyo canab ah oo koray si loo soo saaro khamri cad. Kala duwanaanta noocani waa midka ugu caansan sida "Chardonnay" iyo "Sauvignon". Isticmaalka canabka of kala duwan ee noocaan ah, ka hel wines tayo sare leh soo saaray. Tayada Tani waxay siisaa isaga oo leh sicir sare oo ka mid ah noocyo kale oo canab ah.
Sida loo xanaaneeyo canab ee guga
Canab - qurxin aad u badan, laakiin sidoo kale warshad bacrin ah. Laakiin, nasiib daro, looma xisaabin karo wax aan qabyo ahayn. Si aad u abuurto beer canab ah oo wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad waqti badan iyo dadaal badan ku qaadato, iyo guusha ku sii kordhaysa waxay la timaadaa khibrad. Ka hor intaanad bilaabin inaad abuurto warshad qallalan, waxaa lagama maarmaan ah in la baro dhammaan waxyaabahii injineeriyada beeraha, iyo daryeelka guga ee waa qayb muhiim ah oo geedi socodka ah.
Sharaxaad iyo qarsoodi ah beerashada guul leh ee canab "Arched"
Dalagyada miruhu waxay dhawaanahan noqdaan kuwo caan ah. Dulsaarka iyaga ayaa sii kordhaya sababtoo ah kala duwanaanta noocyo iyo sahlan ee beerashada. Diirinta gaarka ah waa in la siiyaa canab "Arochny", taas oo, oo ku salaysan sharaxaadda kala duwan, marka lagu daro goosashada qani ku ah, waa mid aad u qurux badan. Taariikhda taranta Canabka "Aroch" waxaa laga helay isku dhufashada noocyo "Intervitis Magaracha" iyo "Friendship".
Quudinta bisha ee canab: talooyinka ugu fiican
Nafaqooyinka (macronutrients) ayaa loo tixgelin karaa kuwa ka caawiya dhirta inay koraan oo koraan. Ugu yaraan hal element waa mid halis u ah horumarinta warshad. Canabku ma aha mid ka reeban iyo xulashada ku saabsan hodanka carrada leh nafaqooyinka. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay ninkii beerta oo idil inuu ogaado sida iyo sida loo bacrimiyo canabka xilliga gu'ga iyo bacriminta ay ku habboon tahay kordhinta dhalidda.
Sidee loo bedelaa oo ma waxyeelo canab?
Kuwa ku lug leh beerta iyo beerista, arrin muhiim ah waa bedelida saxda ah ee dhirta kala duwan. Haddii ay jiraan macluumaad badan oo ku saabsan geedo iyo geedo midho leh, markaa xaaladda xayawaanku waa mid aad u adag. Qodobkani waxaan soo bandhigi doonnaa qarsoonaanta geeddi-socodkan, waxaanan kuu sheegi doonaa sida aad canugga uga soo saari karto canabka, taas oo ah, u bedelida masaafo gaaban.
Sida loo koro canab ee Siberia
Dhamaanteen waan jecel nahay inaan cunno canab ah oo macaan leh. Caadi ahaan, waxaa lagu koray dalka, xaaladaha cimilada ee cimilada. Waxaan kuu sheegi doonaa sida loo abuuro canab ku Siberia guga, sida loo daryeelo iyaga. Siberiya iyo canabkiisa Qof walba wuu ogyahay in canabku uu ka mid yahay dhirta kulaylka-jecel iyo qoyaan-jecel, isbeddel heerkulka maalinlaha ah waxay saameyn xun ku yeelaneysaa.
Chlorosis on canab: waxa la sameeyo, sida loo daaweeyo
Canabku waa warshad caadi ah oo ku taal waddamo badan oo adduunka ah, laakiin meel kasta oo ay sii korodho, waxay u baahan tahay daryeel gaar ah, maadaama ay jiraan cuduro badan oo canabku aysan lahayn difaac. Sidaa darteed, waxaan tixgelineynaa mid ka mid ah cudurrada ay canabku u nugul yihiin - chlorosis. Waa maxay chlorosis iyo sida halista ah waa Chlorosis waa cudur ku jira dhirta, taas oo lagu gartaa la'aanta chlorophyll formation caleemaha iyo hoos u dhaca heerka wax soo saarka photosynthesis.
Moobeytka miraha guga oo laga soo qaado cudurada
Iyada oo dhammaan daryeelka cagaarka ah ee cagaarka ah, geedkani waa mid caajis ah oo si xasaasi ah u soo dhaweeya isbeddel kasta oo ka yimaada cimilada ama muuqaalka noolaha waxyeello u geysata geedka. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la fuliyo geed canab ah xilliga gu'ga si loo ilaaliyo cudurada iyo cayayaanka.
Sidee loo daweeyaa canabka canabka ah ee anthracnose?
Haddii aad canab koraan, waxaad u maleyneysaa in si lama filaan ah mugdi madow u muuqday caleemaha iyo caleemaha. Muuqaalka mugdiga mugdiga ee dhammaan qaybahiisa ayaa ka hadlaya cudurka. In this article waxaan si faahfaahsan u sheegi doonaa ku saabsan canaarta anthracnose, waxaa jiri doona sawir ah caleemaha buka iyo talooyin ku saabsan sida loo daweeyo canab.
Sida loola tacaalo cirbaaxda canab
Beerta canabka ah waa quruxda cajiibka ah ee goobta, ka sokow keenista midho iyo caafimaad leh goosashada. Laakiin dhammaanteen waan ognahay in dhirta, nasiib darro, aysan ka tirsanayn qabatada oo waxay u baahan tahay kormeer joogto ah iyo daryeel. Mid ka mid ah dhibaatooyinka caamka ah ee bannaanka u wajahan waa sida loola dhaqmo wiyaal beertiisa canabka ah.
Noocyada kala duwan ee canab "Krasnostop Zolotovsky"
"Krasnostop Zolotovsky" - oo ah noocyo kala duwan oo ah canbar farsamo, taas oo lagu gartaa xilli caadi ah. Waxay ka tirsan tahay noocyada canabka ah ee caan ku ah baqaarada xeebta Badda. Goobta "Krasnostopa" waxaa laga sameeyay gobolka Krasnodar Taariikhda Dhismaha Waxaa jira dhowr nooc oo muuqaalka kala duwan ee noocyada kala duwan.
Yaanyo "Troika", "Siberian Troika" ama "Ruush Troika" - oo hore u bislaaday, adkaysi u yeeshay cudurada
Sidee loo abuuraa ubax? Xaaladee ayay u baahan tahay?
Sidee loo kariyaa toonta la kariyay ee guriga: hababka cuntada lagu kaydiyo iyo kaydinta xilliga jiilaalka
Solyanka holmovaya: Guryaha waxtarka leh iyo codsiga daawada
Goorta iyo sida loo gooyo gooseberries xilliga dayrta
Miraha noocyo khamri
Dalagyada khudaarta ee xilliga qaboobaha
Canab for gobolka Moscow
Kalandarka beeraha Lunar
Dhirta dhirta oo dhan, cacti waxay ka mid yihiin dadka ugu badan ee soo xulashada. In kasta oo xaqiiqda ah in muuqaalka ay u muuqato inuusan u muuqan mid soo jiidasho leh sida daaqada dadka kale ee cagaaran ee xayawaanka daaqada, bannaanka u door bidaan iyaga. Sidaa darteed, haddii aad rabto in aad warshadkan ku hesho guriga, ka dibna aqoonta hababka dhalmada ee caktus noqon doonaa mid aad u faa'iido leh. Read More
Golden Bronzovka: sida loola tacaalo cayayaanka
Waa maxay sababta ay digaagu u leeyihiin dhiigga futada
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Canab 2020